बीएस ६ सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटर नेपाली बजारमा, मुल्य कति ? | दर्पण दैनिक
बीएस ६ सुजुकी एक्सेस १२५ स्कुटर नेपाली बजारमा, मुल्य कति ?
प्रकाशित मिति: २०७८ श्रावण १७ गते ०८:०९
काठमाडौं । भीजी अटोमोबाइल्स प्रालिले बीएस ६ प्रविधिको सुजुकी एक्सेस स्कुटर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । निषेधाज्ञाकै समयमा उक्त स्कुटर नेपाली बजारमा भित्र्याएको हाे। एक्सेस स्कुटरमा ग्यास सिलिन्डर अटाउने तथा ३ जना सवार गर्न सकिने कम्पनीले बताएकाे छ । साथै यसको अगाडि भागमा स्टिलको कभरसमेत रहेको छ। यसमा फोर स्ट्रोक सिंगल सिलिन्डर एयरकुल्ड जडित इन्जिन प्रयोग गरिएको छ।
नयाँ परिमार्जित एक्सेस १२५ स्कुटरमा भारत स्टेज ६ अर्थात बीएस ६ प्रविधि जडान गरिएको छ भने एफआई प्रविधिसमेत रहेको हुँदा उत्कृष्ट माइलेज आउने आकलन गरिएकाे छ । एसओएचसी २ भल्वयुक्त इन्जिन प्रयोग भएको यस स्कुटरमा इन्जिनले ६७५० आरपीएममा ८.७ पीएस पावर र ५५०० आरपीएममा १० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ। एलईडी हेडल्याम्प तथा बाहिरबाटै पेट्रोल भर्न सकिने छ।
इलेक्ट्रिक स्टार्ट र किक स्टार्ट दुबै व्यवस्था रहेको सो स्कुटरमा २२ लिटर बराबरको स्टोरेज राखिएको छ भने मोबाइल चार्जिङ प्वाइन्टसमेत जडान गरिएको छ। दुबै चक्कामा अलोय ह्विल प्रयोग गरिएको सो स्कुटरको जम्मा तौल १०३ किलोग्राम रहेको छ। फुल्ली डिजिटल ड्यासबोर्डले गर्दा ब्लुटुथ, नेभिगेसन जस्ता नयाँ विशेषतासमेत थप रहेका छन्।
हाल २ भेरिएन्टमा उपलब्ध सो स्कुटरमा हाफ डिजिटल र फुल डिजिटलमा मात्रै भिन्नता रहेको कम्पनीले जनाएको छ। फुल डिजिटल ड्यासबोर्डमा एसएमएस अलर्ट, ओभर स्पिड वार्निङ, मोबाइलमा आउने सम्पुर्ण अलर्ट तथा मोबाइलको ब्याट्री अलर्टसमेत जडान रहेको छ।
यसको मूल्य २ लाख ५९ हजार ९ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। रातो, निलो र खैरो गरी तीन रङमा उपलब्ध सुजुकी एक्सेस स्कुटरमा बढि रुचाइएको रङ भने निलो मानिएको छ। यद्यपि यो स्कुटरको नेपाली बजारमा औपचारिक बिक्री प्रारम्भ गरिएको छैन।